Manambara i St Lucia fa hampiantrano ny karnavaly ‘vaxxed’ amin’ny 2022, saingy tena mifanaraka amin’ny zavamisy ve izany? · Global Voices teny Malagasy
Tetika ara-toekarena, fanohanana ny sehatry ny famoronana, sa tetika hanaovam-baksiny?
Voadika ny 30 Desambra 2021 16:59 GMT
Vakio amin'ny teny Dansk, Español, Italiano, English
Fitafy rehefa Karnavaly ao St. Lucia. Sary an'i Gary J. Wood ao amin'ny Flickr, CC BY-SA 2.0.
Ilay fanapahankevitry ny governemanta ao St. Lucia hanao Karnavaly iray atreham-batana amin'ny 2022—nomena anarana hoe “The Vaxxed Mas” dia nahatonga ireo mpankafy Karnavaly haka toerana sy handinika fatratra. Hatramin'ny nidiran'ny valanaretina COVID-19 tany amin'ny morontsirak'i Karaiba tamin'ny Martsa 2020, nahazo kapoka ireo fankalazàna Karnavaly tao amin'ilay faritra: ny Fetiben'ny Fahavaratra fanao ao Anguilla isantaona, ny Crop Over ao Barbados, Junkanoo ao Bahamas, ary ireo Karnavaly any amin'ireo nosy samihafa— toa an'i Antigua sy Jamaika—izay hitranga aoriana kely raha ny tetiandron'ny taona.
Nahavita nanao ny “fihodinany farany” ny fetibe an-dalambe ao Trinidad & Tobago, izay azo ambara fa ny lehibe indrindra sy malaza indrindra, satria ny karnavaliny tamin'ny 2020 dia vita talohan'ny nanamafisana ny tondron'ny tranga viriosy tao amin'ny firenena. Kanefa, nofoanana ny fankalazàny ho an'ny taona 2021, na teo aza ny ezak'ireo mpanakanto mpiangaly mozika soca, izay nanao ny faraherin-dry zareo hitahirizana ny fanahin'ny Karnavaly ho velona miaraka amin'ireo famoahana zava-baovao mifandraika amin'ny valanaretina. Na izany aza, nizaka ny mafy tokoa ireo mozisiàna sy ireo mpamorona hafa, izay miankina betsaka amin'ny Karnavaly ny fidirambolany, na niezaka ny hanaraka ny onjany aza ry zareo.
Ho an'ny maro, tafiditra ao anatin'ilay fampifanarahana ny fotokevitry ny Karnavaly virtoaly, zavatra izay efa nitranga tany anatin'ireo Karnavaly kelin'ireo zanaka am-pielezana toy ny tao Notting Hill Britanika. Hatreto, anefa, toa tsy resy lahatra amin'ny hahaterahan'izy io ireo governemantam-paritra, miaraka amin'i Winston “Gypsy” Peters, mpiangaly gadona calypso lasa pôlitisiàna, mitantana ny Kaomisiôna Nasionalin'ny Karnavaly ao Trinidad & Tobago, izay nilaza fa ilay fetibe dia “fanatanjahantena ifampitankosinkosenana” izay ilaina ho “be olona.”
Tamin'ny Oktôbra, ny Karnavaly Miami, iray amin'ireo malaza indrindra eny anivon'ireo Karnivaly fanaon'ny am-pielezana, dia nahavita nikarakara hetsika azo natrehana na teo aza ny haavon'ny isan'ireo tratry ny COVID-19 tao amin'ny firenena. Raha maro ireo niasa saina momba ny hoe fahendrena sa tsia ny mikarakara hetsika manana lanja be sy “tena faran'izay mpampiparitaka” ao anivon'ny valanaretina, ny hafa izay nanatrika azy kosa nanohana ny hoe fahombiazana ny politika nitondran'ireo mpikarakara azy tamin'ny hoe “tsy misy maska, tsy misy ‘Mas’ ” (fanamarihana : ny “mas” dia karazana fanovàna endrika, fanafohezana ny hoe masqeurade) .
Ny tao St. Lucia no voalohany tamin'ireo karnavalim-paritra nanambara ny fikasany hikarakara toy ny mahazatra amin'ny Jolay 2022, na dia nisy aza ireo nosy hafa nanao sarinteny momba izay mety ho fahafahana izay. Ernest Hilaire, minisitry ny kolontsaina ao St. Lucia, dia nametraka mazava tsara fa mba hahafahana mandray anjara amin'ireny hetsika firavoravoana ireny, ireo mpanjifa rehetra sy ireo mpanome tolotra dia tsy maintsy efa vita vaksiny daholo. Nampiany hoe, “Tsy maintsy ataontsika izay hahazoana antoka fa voaarontsika ny fahasalamana eto St. Lucia no sady mamorona hetsika ara-toekarena ho an'ny vahoakantsika mba hahazoana tombony avy amin'izany.”
Kanefa, ankoatry ny mety ho tombony be ara-toekarena, ny fanambaràn'ny governemanta ihany koa momba ilay hetsika dia mahatonga hanantena fa hitondra vokatra miabo amin'ny tahan'ny vita vaksiny ao amin'ny firenena ilay hetsika:
Ho hentitra ny torolalana sy ny fepetra ho apetraka tsy maintsy arahana, ary ny manampahefana dia hiantoka ny hisian'ny fanajàna antsakany sy andavany an'izany mba hiarovana ny fahasalamana sy ny fiadanan'ireo rehetra mpandray anjara. Ho ambara amin'ny fotoana mahamety azy ireo torolàlana, aorian'ireo atrikasa fakankevitra vaovao iarahan'ny ministeran'ny fahasalamàna amin'ireo mpiray ombona antoka.
Ndeha isika hatao vaksiny ary ndeha hisitraka ny ‘Mas’!
Miaraka amin'ireo vahoaka 184.838 voaisa tao St. Lucia hatramin'ny 12 Desambra 2021, milaza ny OMS fa efa fatram-baksiny 103.092 no efa natsindrona hatramin'ny 3 Desambra, izany hoe manodidina ny 55% amin'ny vahoaka, na eo aza ireo tatitra sasany manamafy fa mbola ambany be ny tahan'ny vita vaksiny, manodidina ny 30 isanjato.
Mandritra izany fotoana izany, Dr Merle Clarke, filohan'ny Saint Lucia Medical and Dental Association (SLMDA), niteny fa ny hany fomba hahombiazan'ilay hetsika dia ny fampitomboana betsaka ny tahan'ny olona vita vaksiny ao amin'ny firenena. Tamin'ny fotoana nanoratana ity, nanamafy i St Lucia fa 13.067 ireo tranga COVID-19, ka 283 no maty.
Raha fitaovana entina mandrefy ny fomba fandraisan'ny olona ny vaovao anefa ireo rojon-panehoankevitra any anaty media sôsialy, ny toa tena mibahana indrindra dia ny tsy fahatokisana. Iray amin'ny mpampiasa Facebook i Fabie Jay, nanampy hoe:
Mankamin'ny 2022 i St Lucia saingy tsy tsapan'ny governemanta ve ireo hadalàn-dry zareo?. Ho ampy ve ny dokotera hizaha ny isambatan'olona? Tsy efa hitako sahady ve ny ho faharesen'ny antokon'ny mpiasa amin'ny fifidianana manaraka amin'ny 2026 ?
Mandritra izany fotoana izany, tao amin'ny Twitter, ireo mpamorona ny Karnavaly no efa nampahafantatra sahady ny tarik'izy ireo :
? M A L A Z A ? @legendsCarnival
Vonona hiaina ny zava-malazan'ny 2022?!
Aza miala amin'ny fanarahana ny sehatra media sôsialinay mba hahazoanao ny vaovao tsy tapaka sy ny imailaka malaza àry.
M I A L A A N Y amin'izao fotoana izao ny Vibes …….?#legendscarinival #stluciacarnival #legends #stlucia #carnival #carnival2022 pic.twitter.com/jvHrPMJcEn
— Legends Carnival Band (@LegendsCarnival) 20 Jolay 2021
Ho hita eo raha toa hiakatra ny tahan'ny olona vita vaksiny ka hahafahan'ny governemanta miroso araka ny efa voalazany, raha hanara-dia na tsia ny dingana feno fahasahiana ataon'i St Lucia koa ireo nosy ao Karaiba .